Shicilela Indawo Yakho Yokuthengisa Ku-inthanethi neMilo | Martech Zone
Ngesonto eledlule ngikhulume noRob Eroh, ophethe amaqembu womkhiqizo nobunjiniyela ku Milo. IMilo yinjini yokusesha yendawo ehlanganiswe ngqo nePoint of Sale (POS) yomthengisi noma i-Enterprise Resource Planning (ERP). Lokhu kuvumela iMilo ukuthi ibe yinjini yokusesha enembile kunazo zonke uma kukhulunywa ngokukhomba izinto ezisohlwini lwakho. Inhloso kaMilo uku yiba nawo wonke umkhiqizo kuwo wonke amashalofu kuzo zonke izindaba kuwebhu… Kanye nokunciphisa ubunzima bokuthenga oku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Benza umsebenzi omuhle impela!
Le nkampani isencane ineminyaka engu-2.5 kodwa sebenabathengisi abangaphezu kwe-140 abanezindawo ezingama-50,000 kulo lonke elase-United States futhi bangeza okuningi nsuku zonke. Luhlelo olulula olunikeza insizakalo enhle kakhulu. UMilo ushaya imakethe enkulu… abathengi abayifunayo manje futhi abafuni ukulinda ukulethwa (njengami!). Akukho lutho olukhungathekisayo njengokubonisa esitolo nokuthi zingabikho ohlwini ... ngakho-ke uMilo ukunakekele nalokho. Nasi isibonelo sokusesha engikwenzele ama-LCD Televisions azungeze i-Indianapolis:
Ukhiye wempumelelo kaMilo kube ukuthi bakhiphe umzamo ekuhlanganisweni… empeleni, basungule iMilo Fetch, insizakalo ye-beta nokuhlanganiswa ne-Intuit QuickBooks Point of Sale, Intuit Quickbooks Pro, Microsoft Dynamics Retail Management System, Retail Indawo yokuthengisa ye-Pro ne-Comcash.
Ukusungulwa kweMilo sekuvele kutholakala ngokusebenzisa I-RedLaser, uhlelo lokusebenza lokuskena lwamahhala lwe-iPhone ne-Android. IMilo nayo isiyatholakala ku-Android. Futhi ngo-2012 iMilo iyahlanganiswa nezinye izinhlelo zokusebenza zeselula ze-eBay. Ngaphandle kosesho nje, iMilo nayo ihlola izici zokuphuma, futhi. Cabanga ukuthi… funa into, uyithenge, uphume esitolo esinayo esitokweni ekhoneni!
Uma ungumthengisi, thola i-inventory yakho online manje nge Milo.
Tags: IComcash Point of SaleeBayIphuzu Lokuthengisa le-Intuit QuickBooksI-Intuit Quickbook Proukusesha kwendawo kokuthengaUhlelo Lokulawulwa Kwe-Retail ye-Microsoft Dynamicsi-miloukulanda imiloUkuthengisa Pro
Mar 21, 2012 ku-4: 26 AM
UDoug, lokhu kungikhumbuza iZaarly nengiyithandayo, iTaskRabbit.